Union Minister for Int’l Cooperation meets with IFRCRCS Chair in New York – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister for Int’l Cooperation meets with IFRCRCS Chair in New York
Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin, who is attending the 73rd General Assembly of the United Nations in New York, met with Chair of International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCRCS) Dr. Jemilah Mahmood at 10.30 am local time at the UN Headquarters in New York on 27th September.
At the meeting, they discussed issues related with repatriation, resettlement and rehabilitation of the displaced people in Rakhine State.
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီအဖွဲ့ မိတ်ဖက်များဆိုင်ရာ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၂၈-၉-၂၀၁၈ ရက်၊ နယူးယောက်မြို့)
(၇၃) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ကိုယ်ခွဲခေါင်းဆောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ၂၇-၉-၂၀၁၈ ရက်၊ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀၃၀ နာရီတွင် နယူးယောက်မြို့၊ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်ရှိ တွေ့ဆုံခန်းအမှတ် GLA-24 ၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီနှင့် လခြမ်းနီ ဥက္ကဌအဖွဲ့ မိတ်ဖက်များဆိုင်ရာ လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ် Dr. Jemilah Mahmood ကို လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။